Mila ny saha rehetra!
Mamorona doka vaovao
Aiza no tianao anehoana ny doka nataonao?
Asongadin'ny Desktop (1200px ny sakany 280px ny halavany)Misongadina amin'ny Finday (336px ny sakany 280px ny halavany)Misongadina ao amin'ny Tablet (768px ny sakany 280px ny halavany)
Lohateny doka (40)
Famaritana doka (80)
Bokotra fihetsika (20)
URL doka (255)
Rehefa te hanomboka haneho doka ianao?
Safidio ny maodely faktiora sy ny fampisehoana Limit
Preview momba ny doka
Fizarana doka ankehitriny
Fizarana asongadiny - ity no fizarana lehibe indrindra eo ambanin'ny zotram-pikarohanay sy fampandrenesana ary hita ao amin'ny lahatsoratra sy pejin-tranonkala rehetra ao amin'ity tranonkala ity izany. Sady misy ny birao ary ny kinova finday misy.
Mila programa manokana?
Azonay atao koa ny mamorona programa manokana ho anao mifototra amin'ny fitaovana, firenena, sokajy ary ny daty. Azafady mba omeo antsipiriany vitsivitsy hahafahanay miresaka momba izany aminao. Azafady AZA mampiasa ity takelaka ity raha mila fanazavana momba ny paositra na fangatahana backlink. Hofafana ny fangatahanao.